Maqal : Muran Ka Taagan Beerta Degmada ee Magaalada Garowe – SBC
Maqal : Muran Ka Taagan Beerta Degmada ee Magaalada Garowe
Gudoomiye Ku xigeenka Gobolka Nugaal Cali Salaad Diiriye oo waraysi siiyey SBC ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin Ganacsato dowlada hoose ee Garowe ay Ku wareejisay Beerta degmada Garowe oo uu sheegay in dad gaar ah doonayaan in ay Ku danaystaan hantida umadda ka dhacaysa .
Dhinaca kale xildhibaan ka tirsan golaha degaan iyo dadwaynaha Garowe qaarkood oo SBC la hadlay ayaa ka hor yimi in beertaasi ganacsato gaar ah lagu wareejiyo iyadoo aan tartan furan loo galin .
Maamulka degmada gaar ahaaan duqa iyo Ku xigeenkiisa oo aan la hadalnay si ay uga jawaaban arintaan lagu eedaynayo ayaa ka gaabsaday in ay hada ka hadlaan balse waxaa ay sheegeen in ay dhawaan si faahfaahsan uga hadli donaan .
Ganacsatada doonayaa in la wareegaan berta ayaa haysta waraaqo ay u qoreen maamulkii hore ee degmada Garowe iyo midka hada jooga soda uu ii sheegay gudoomiye Ku xigeenka Gobolka Nugaal Calisalaad Diiriye .
Maraan wey diinay sababta ay u diidayaan In Goobtan laga kireeyo Ganacsatada, maadaama ay dhaqaalo ka heleyso Dowladu, intii ay iska xirnaan laheyd ayuu sheegay in go’aankaasi aysan gaari karin cid Gooni ah Islamarkaana loo baahanyahay in laga tashto,
Muranada ku aadan Dhinaca Hantida Dowladda iyo Kuwa Rayidka ah ayaa aad ugu soo badanaya Magaalada Garowe iyo Qeybo Kale oo kamid ah Gobolka Nugaal iyagoo Qaarkood Xal wanaagsan laga gaaray